﻿﻿ Yoon Mi Mi
Why we chose GUSTO ?
IT အထူးပြုနဲ့ ဘွဲ့ ယူပို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တက်ရမယ့်ကျောင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့က အဓိကဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် IT နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျောင်းတွေသေသေချာချာလေး အသေးစိတ် လေ့လာစုံစမ်းဖြစ်တယ်။ လက်လှမ်းမီရာ IT နယ်ပယ်က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ ဆရာသမားတွေကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း GUSTO ကို Recommend ပေးကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အသေးစိတ်စုံစမ်းကြည့်တော့ IT နဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း မြန်မာပြည်မှာ GUSTO က ထိပ်ဆုံးက
ရပ်တည်နေတဲ့အတွက် GUSTO University ကို ရွေးချယ်တက်ရောက်ဖြစ်တာပါ။
ကျွန်မရဲ့ ရွေးချယ်မှုက မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကို ကျောင်းတက်ပြီး တစ်လ နှစ်လ အတွင်းမှာပဲ သိခဲ့ရတယ်။ ဆရာ/မ တွေက စာသင်ကြားမှု အရမ်းကောင်းတယ်။ စာသင်ချိန်မှန်မှန် ဝင်သလို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ နားလည်လာတဲ့အထိ ရှင်းပြတယ်။ နားမလည်တာတွေရှိရင်လည်း ဆရာ/မ တွေနဲ့ Appointment ယူပြီး စာမေးလို့ရတယ်။ သင်ရတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကလည်း တကယ့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မယ့် ဘာသာရပ်တွေဖြစ်လို့ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်တစား လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းရဲ့ ပံ့ပိုးမှုအပိုင်းကလည်း ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် တော်တော်လေး လုံလောက်ပြည့်စုံပါတယ်။ အဲ့ထဲကမှ နေမကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှ တောင် သေချာလေးဂရုစိုက် နွေးထွေးပေးတာတွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ GUSTO မှာ တက်ရတဲ့အတွက် IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရောတွေကို အသေးစိတ်သိရသလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း ရှိစေတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်လည်း ကျယ်ပြန့်လာပြီး ကိုယ့်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ယုံယုံကြည်ကြည် ချနိုင်လာခဲ့ပါတယ်။
Wunna Kaung Myat
Nyan Thu Htet
Address: No. 216, Shop-house Building 2B, Times City Complex, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
© 2022 GUSTO UNIVERSITY. All rights reserved.